ကျောင်းကပွဲမှာ ပါမောက္ခဆရာမကြီးကိုယ်တိုင်ပြန်လည်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကြောင့် အံသြ၀မ်းသာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ စိုင်းစိုင်း – Swel Sone News
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ ပျိုပျိုမေမေတို့ရဲ့ အချစ်တော် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်ချစ်ခင်အားပေးမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးလူငယ်မရွေးအားပေးခြင်းခံနေရပြီး သူကတော့ (၁၅)နှစ်တိုင်တိုင် အောင်မြင်မှုအရှိန်အ၀ါကျဆင်းသွားခြင်းမရှိတဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စိုင်းစိုင်းတစ်ယောက်ကတော့ အဆိုပိုင်းသာမက သရုပ်ဆောင်ပိုင်မှာ ပါရမီပါသူပီပီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်း ခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေဖြင့် ပါဝင်ရိုက်ကူးနိုင်သည်အထိ အောင်မြင်မှုရရှိထားပါတယ်။
သူကတော့ စီပွားရေးအနေဖြင့်လည်း SAI Cosmetix တံဆိပ်ဖြင့် အလှကုန်ပစ္စည်းလေးတွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီး နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုကိုအကောင်းဆုံးရရှိထားပါတယ်။လတ်တလောမှာတော့ တစ်ချိန်က စိုင်းစိုင်းရဲ့ နာမည်ကြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “အချစ်သို့ရှုံးနိမ့်ခြင်း” သီချင်းကို မေဂျာပွဲလေးတစ်ခုမှာ ပါမောက္ခဆရာမကြီးက ပြန်လည်သီဆိုထားပါတယ်။ဆရာမကြီးကတော့ လွန်ခဲ့သောနှစ်က နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်ကြီး ဦးချစ်ကောင်းရဲ့ “ကိုယ်ရေးပုံတူ” သီချင်းကို အမိုက်စားသီဆိုခဲ့တဲ့ ပါမောက္ခ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မာအုန်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းကတော့ ဆရာမကြီး Hip Hop သီချင်းကို အမိုက်စားသီဆိုဖျော်ဖြေထားမှုကို သဘောကြနေတာကို “Love this performance! Whatacute one!” လို့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နာမှ ဆရာမကြီး သီဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို Share ထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော အမိုက်စားပုံစံသီဆိုထားတဲ့ စိုင်းစိုင်းရဲ့ သီချင်းလေးကို နားထောင်ပြီးရင် မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
“ကြောငျးကပှဲမှာ ပါမောက်ခဆရာကွီးကိုယျတိုငျပွနျလညျသီဆိုထားတဲ့ သီခငျြးဟောငျးလေးတဈပုဒျကွောငျ့ အံသွဝမျးသာဖွဈခဲ့ရတဲ့ စိုငျးစိုငျး”
နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးစှဲ ပြိုပြိုမမေတေို့ရဲ့ အခဈြတျော နိုငျငံကြျောအဆိုတျော စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ ဟာဆိုရငျ ပရိသတျခဈြခငျအားပေးမှုအမြားဆုံးရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျလညျးဖွဈပါတယျ။လူကွီးလူငယျမရှေးအားပေးခွငျးခံနရေပွီး သူကတော့ (၁၅)နှဈတိုငျတိုငျ အောငျမွငျမှုအရှိနျအဝါကဆြငျးသှားခွငျးမရှိတဲ့ ရှမျးတိုငျးရငျးသား အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။စိုငျးစိုငျးတဈယောကျကတော့ အဆိုပိုငျးသာမက သရုပျဆောငျပိုငျမှာ ပါရမီပါသူပီပီ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာလညျး ခေါငျးဆောငျမငျးသားအနဖွေငျ့ ပါဝငျရိုကျကူးနိုငျသညျအထိ အောငျမွငျမှုရရှိထားပါတယျ။
သူကတော့ စီပှားရေးအနဖွေငျ့လညျး SAI Cosmetix တံဆိပျဖွငျ့ အလှကုနျပစ်စညျးလေးတှကေို ထုတျလုပျရောငျးခပြွီး နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အားပေးထောကျခံမှုကိုအကောငျးဆုံးရရှိထားပါတယျ။လတျတလောမှာတော့ တဈခြိနျက စိုငျးစိုငျးရဲ့ နာမညျကွီး သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈတဲ့ “အခဈြသို့ရှုံးနိမျ့ခွငျး” သီခငျြးကို မဂြောပှဲလေးတဈခုမှာ ပါမောက်ခဆရာမကွီးက ပွနျလညျသီဆိုထားပါတယျ။ဆရာမကွီးကတော့ လှနျခဲ့သောနှဈက နိုငျငံကြျော အဆိုတျောကွီး ဦးခဈြကောငျးရဲ့ “ကိုယျရေးပုံတူ” သီခငျြးကို အမိုကျစားသီဆိုခဲ့တဲ့ ပါမောက်ခ ဆရာမကွီး ဒျေါခငျမာအုနျး ပဲဖွဈပါတယျ။
စိုငျးစိုငျးကတော့ ဆရာမကွီး Hip Hop သီခငျြးကို အမိုကျစားသီဆိုဖြျောဖွထေားမှုကို သဘောကွနတောကို “Love this performance! Whatacute one!” လို့ သူရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနာမှ ဆရာမကွီး သီဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို Share ထားပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရော အမိုကျစားပုံစံသီဆိုထားတဲ့ စိုငျးစိုငျးရဲ့ သီခငျြးလေးကို နားထောငျပွီးရငျ မှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။
“အမှုကျေအေးပေးလို့ ဘေဘီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါ” ဆိုတဲ့ အဆိုတော် အစ္စဏီ
အတိတ်ကအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်တွေက်ိုပြောပြလာတဲ့ သူရိယ
အမြူးကြွဆုံးသံစဉ်တွေကြားမှာ အမိုက်စားကကွက်တွေနဲ့ အကြမ်းစားကပြလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းက ဖယောင်းစက်ရုံ Level4အဆင့်မီးလောင်မြိုက်လျက်ရှိနေပြီး ရေနှင့်ငြိမ်းသတ်မရဖြစ်နေ